अनुदानको आशमा ऋणको भारी |
प्रकाशित मिति :2018-05-24 14:12:27
ओखलढुंगाको खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ४ खिजीकातिकी भूकम्प प्रभावित केवलमाया सुनुवारले ऋण काढेर घर र्निर्माण गरिन् । सरकारले जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई थप ५० हजारसम्म अनुदान दिने सुने पछि ऋण काढेर घर बनाएकी थिइन् । उनी अपांगता भएकी महिला हुन् ।
वडा अध्यक्ष कमल न्यौपानेले जोखिम वर्गमा पर्ने भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गरे । तर, उनको सिफारिस जिल्ला समन्वय समितिबाट अभिलेखका लागि राष्ट्रिय पुनः र्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा अध्यावधिक गराउँदा अभिलेखमा नामै छैन ।
सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ११ की जन्मकुमारी खत्री लाभग्राहीमा सुचिकृत एकल महिला हुन् । उनलाई पनि थप सहायताका लागि वडा कार्यालयले गत माघ ७ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्यो । उनको पनि समन्वय समितिले सिफारिस पठाए पछि अध्यावधिक गरेको विवरणमा नाम छैन ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्ला समन्वय समितिमा सिफारिस गरिएका कति भूकम्प प्रभावित व्यक्तिका यस प्रकारका निवेदन हराए त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिले राष्ट्रिय पुनः र्निर्माणप्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पठाएर जोखिम वर्गमा पर्ने भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ अनुसार तयार गरिएको विवरणमा १ हजार ३ सय ३ जना व्यक्तिको अभिलेख छ । अभिलेख अनुसार ६ सय ७८ जना एकल महिला छन् ।
केवलमायालाई भने आफ्नो नाम जिल्लाबाट सिफारिसमा नपरेको भन्ने नै थाहा छैन । उनी अनुदान आउँछ भन्ने आशा पालेर बसेकी छन् । ‘पचास हजार पाएपछि ऋण तिर्न भनेर पर्खेर बसेकी छु’ उनले भनिन् । अनुदानबाफत पाएको रकमले घर बनाउन नपुग्दा उनले थप पचास हजार पाइन्छ भन्ने सुने पछि ऋण लिएर घर बनाएको बताइन् ।
अर्की एकल महिला जन्मकुमारी खत्रीले पनि त्यसै गरिन् । उनी पनि पचास हजार पाउने आशामा बसेकी छन् ।
तर, राज्यका निकायको लापरवाहीले दुवै जना भूकम्प पीडितको अभिलेख हराएको छ । जिल्लास्तरका कार्यालयबाट राष्ट्रिय पुनः र्निर्माणप्राविधिकरणमा पठाउँदा उनीहरुको अभिलेख छुटाइएको छ ।
कार्यालयमा आएका सबै निवदेनको अभिलेख तयार गरेर पठाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सामाजिक विकास विज्ञ सुनिता अधिकारीले बताइन् । उनले सबै विवरण पठाइएको दावी गरिन् ।
यस्तो थियो व्यवस्था
भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को दफा ३ (१) अनुसार जोखिम वर्गमा पर्ने व्यक्ति लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएकामध्य ६५ वर्ष नाघेका एकल महिला, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक, १६ वर्ष मुनिका बालबालिका र अपांगता भएर रातो र निलो कार्ड प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई भनिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्ति छनौट गरे पछि सरकारले पुनःर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधी, २०७३ दफा ७ को उपदफा २ खण्ड (घ) को २ अनुसार पचार हजारसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरण भन्छः निवेदनको अर्थ छैन
एकातिर यसरी वडाबाट आएका निवेदन अभिलेख तयार गरेर पठाउने निकायको लापरवाहीले जिल्लामै नाम छुटेका छन् । अर्कोतर्फ पठाइएका सिफारिसका अभिलेख समेत अहिले आएर पुनः र्निर्माण प्राधिकरणले औचित्य नभएको भन्दै पीडितहरुलाई थप पीडा दिनेका काम गरेको छ ।
प्राधिकरणले जिल्लामा सूचना जारी गरेर वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस संकलन गरि मातहत कार्यालयबाट आफैले मागेको अभिलेख नहेर्ने भने पछि थप अनुदानको आश गरेर ऋण काढेका भूकम्प प्रभवितलाई राहतको आश गर्दा आहत थपिदिएको छ ।
जिल्लाबाट धेरै निवेदन धेरै प्रकृतिका आएकाले छानविन नगरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । ‘जिल्लाका निवेदनको अब औचित्य देखिएन, केन्द्रबाटै सर्भेक्षण गरेर देशैभर हामीले लाभग्राही पहिचान गरेका छौं’ उनले भने । ओखलढुंगाका २ सय १८ जना एकल महिला प्राधिकरणले पहिचान गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
पहिचान भएका मध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएकाहरुलाई थप अनुदान दिन नमिल्ने मापदण्ड रहेको घिमिरेले बताए । र्निर्माणगर्न नसक्नेलाई गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा पुनः र्निर्माणगराउने वा पचास हजार नगदै दिने प्रावधान बनेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको नयाँ मापदण्डले छनौटमा परेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएका र अनुदानको आशमा ऋण गरेर घर बनाएका एकल महिला सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
पीडितलाई ऋणको भारी
अनुदान दिने भनेर सूचना निकाले पछि दुर्गमका पीडितहरु दुई तीन दिन लगाएर वडा कार्यालयका सिफारिस लिएर जिल्ला समन्वय समितिमा दर्ता गराउन आएका थिए । ‘दुई दिन लगाएर जेष्ठ नागरिक, एकल महिलाले वडाका सिफारिस लिएर सदरमुकाम गए, अहिले छानविन नहुने भनेर राज्यले थप पीडा दिएको छ’ खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष कमल न्यौपानेले भने ।
खिजीदेम्वाकी केवलमाया सुनुवारजस्तै सुनकोसी गाउँपालिकाकी धनमाया गिरीले आफूले थप अनुदान पाउने आशमा ऋण गरेर घर र्निर्माण गरेको बताइन् । उनले सरकारले किन ढाँटेर हामीलाई ऋणमा पारेको भन्दै आक्रोश पोखिन् ।
यसरी थप अनुदानका लागि सिफारिसमा परेका प्रभावितहरुले ऋण गरेर घर बनाएका छन् । तर, निवेदन लिने, छानविन नै नगरी सुटुक्कै मापदण्ड फेरेर प्राधिकरणले सुनुवार र गिरीजस्ता ओखलढुंगाका ६ सय ७८ जना एकल महिलालाई ऋणको बोझ थपिदिएको खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष कमल न्यौपानेले बताए ।